Covid -19 ကွောငျ့ Quarantineဝငျနရေသူတှနေဲ့ မဲရုံစောငျ့ရမယျ့ ပညာရေးဝနျထမျးတှေ ဘာစိုးရိမျနကွေသလဲ ? သကျဆိုငျရာက ဘာတှပွေငျပွီးပွီလဲ ? – Voice of Myanmar
Covid -19 ကွောငျ့ Quarantineဝငျနရေသူတှနေဲ့ မဲရုံစောငျ့ရမယျ့ ပညာရေးဝနျထမျးတှေ ဘာစိုးရိမျနကွေသလဲ ? သကျဆိုငျရာက ဘာတှပွေငျပွီးပွီလဲ ?
မန်တလေး၊စကျတငျဘာ- ၁၄- ၂၀၂၀
၂၀၂၀ခုနှဈနိုဝငျဘာလ၈ရကျနမှေ့ာကငျြးပမယျ့ရှေးကောကျပှဲမှာ ရှေးကောကျပှဲနီးမှ Quarantine ဝငျရခဲ့သညျရှိသျော ရောဂါပိုးတှရှေိ့ခဲ့သျော ကွိုတငျမဲပေးခှငျ့ရသူစာရငျးမှာ သခြောထညျ့သှငျးမထားတဲ့အတှကျ မဲပေးခှငျ့ဆုံးရှုံးနိုငျတာမို့ စိုးရိမျမှုတှရှေိနပေါတယျ။
ဒီလို စိုးရိမျမှုတှဖွေဖြေောကျဖို့ လူတိုငျမဲပေးခှငျ့ မဆုံးရှုံးအောငျQurantine ဝငျနတေဲ့သူတှနေဲ့Positive လူနာတှမေဲပေးခှငျ့ရအောငျ ဘယျလိုတှစေီစဉျထားသလဲလို့ ကနျြးမာရေးနဲ့အားကစားဝနျကွီးဌာနပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူညှနျကွားရေးမှူးဒေါကျတာခငျခငျကွီးကို VOM က ဆကျသှယျမေးမွနျးရာမှာတော့
“ Quarntine ဝငျနတေဲ့သူတှမေဲပေးခှငျ့မဆုံးရှုံးအောငျသကျဆိုငျရာQurantine Center ကအဖှဲ့တှေ၊ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျကအဖှဲ့တှေ၊ကနျြးမာရေးနဲ့အားကစားဝနျကွီးဌာနရဲ့ကွီးကွပျမှုတှအေောကျကနအေန်တရာယျမဖွဈအောငျမဲပေးနိုငျဖို့စီးစဥျထားပွီဖွဈပမေယျ့Positive လူနာတှပေါမဲပေူခှငျ့မဆုံးရှုံရအောငျအသေးစိတျ ညှိနှိုငျးနပွေီဖွဈတယျ” လို့ ဖွပေါတယျ။
” ၂၀၂၀ခုနှဈနိုဝငျဘာလ၈ရကျနမှေ့ာကငျြးပမယျ့အထှထှေရှေေးကောကျပှဲကာလမှာQurantine ဝငျနသေူတှကေတော့ပုံစံ၃(က) နဲ့မဲပေးနိုငျမှာဖွဈပွီးPositive လူနာတှအေတှကျကတော့မဲပေးနိုငျဖို့မစီစဥျရသေးဘူး” လို့ VOM ကိုပွောပါတယျ။
လကျရှိမှာတော့Q Center ကသူတှကေိုကွိုတငျမဲပေးနိုငျဖို့စာရငျးကောကျထားတာဖွဈပွီးမဲပေးမယျ့သူတှကေတော့ပုံစံ၃(က)နဲ့လြှောကျထားနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
“မူဆယျဘကျကလာတာတို့မွဝတီဘကျကလာတာတို့မန်တလေးမှာရှိတယျလနေယျတှဘေကျကလာတာတို့ဆိုပေးမပွနျဘဲနဲ့မန်တလေးကQ Center တှမှောဝငျခိုငျးတာဗြ၊အဲ့Q Center ကလူတှစောရငျးကိုကနြျောတို့ကကောကျခိုငျးတယျ၊ဥပမာအောငျမွသောဇံကတက်ကသိုလျတဈခုမှာQ Center ရှိတယျဆိုအဲ့ကလူတှကေအောငျမွသောဇံမွို့နယျကိုစာရငျးပေးရမှာအဲ့မှာလူ၂၀၀ရှိတယျဆိုရငျအဲ့စာရငျးထဲမှာမွငျးခွံကပါမယျတောငျသာကပါမယျ၊အဲ့လိုဆိုမူလမွငျးခွံတို့တောငျသာတို့ကမူလမဲစာရငျးတှကေိုဖကျြပွီးသူတို့လကျရှိရောကျရှိနတေဲ့Q center ကနသေူတို့မဲပေးဖို့လုပျနပွေီဆိုပွီး၃(ခ) နဲ့လှမျးဖကျြမှာပါ”လို့မန်တလေးတိုငျးရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျဥက်ကဋ်ဌ ဦးရှိနျဝငျးကပွောပါတယျ။
Q Center ကလူတှကေမဲပေးဖို့လြှောကျထားလာရငျသကျဆိုငျရာမွို့နယျကိုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျကနပေုံစံ၃ခနဲ့ပယျဖကျြပွီးမိမိတို့ရောကျနတေဲ့မွို့နယျကQ Center ကနမေဲပေးနိုငျဖို့စီစဥျထားတယျလို့မန်တလေးတိုငျးရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျဥက်ကဋ်ဌဦးရှိနျဝငျးကပွောပါတယျ။
လကျရှိမှာတော့Q Center ကလူတှကေိုမဲပေးနိုငျဖို့စာရငျးကောကျထားဆဲဖွဈပွီးသကျဆိုငျရာQ Center တှမှောလြှို့ဝှကျမဲဆန်ဒပေးဖို့ဆောငျရှကျသှားမှာဖွဈတယျလို့သိရပါတယျ။
Qurantine Centerမှာ နရေနိုငျတဲ့သူတှကေ မဲမေးခှငျ့မရမှာစိုးရိမျတာရှိသလို မဲရုံစောငျ့ရမယျ့ ပညာရေးဝနျထမျးတှမှောလညျး စိုးရိမျမှု အပွညျ့ရှိနပေါတယျ။
” အခုCovid sevond wave ကပိုပွီးမွနျဆနျတော့အပွီးသတျနညျးနညျးလေးဝေးသှားလညျးရှေးကောကျပှဲရကျကနီးကပျမှာဘဲလမွေို့ပျေါကမြယျသူနဲ့နယျမှာကမြယျ့ဆရာဆရာမတှအေတှကျကပိုပွီးတော့အန်တရာယျမြားတယျ၊နယျမှာဆိုရငျတော့မဲရုံလုပျမယျ့နရောတှမှော၊Qurantine Center တှမှောရှိကိုရှိနိုငျတယျ၊အဲ့ဒီတော့ မဲရုံတှေ၊Qurantine center တှကေိုလညျးပိုးသတျဆေးဖွနျးထားဖို့သငျ့ပါတယျ။ ရောဂါအခံရှိတဲ့ဆရာဆရာမတှအေတှကျကလညျးကနျြးမာရေးဆိုငျရာစိုးရိမျနရေတယျ။ နိုငျငံတျောကပေးတဲ့တာဝနျဆိုတော့တာဝနျကရြာတော့လုပျရမှာပါ”လို့ပွောပါတယျ။
မဲရုံစောငျ့ရမယျ့ ဆရာ၊ဆရာမတှရေဲ့ ကမ်ြမာရေးအတှကျ ကွိုတငျပွငျဆငျတဲ့ အစီအစဉျတှမှောတော့ နှာခေါငျးစညျး၊ လကျဆေးရညျ၊ လကျအိတျ ဆိုတာတှေ ပွငျဆငျတယျဆိုတာလောကျပဲ ကွားသိရပွီး တခွားအကွီးစားပွငျဆငျမှုတော့ မသိရသေးပါဘူး။
စကျတငျဘာလ၁၂ရကျနအေ့ထိသကျဆိုငျရာမွို့နယျတှမှောQurantine ဝငျနသေူစာရငျးအရအေတှကျအရရနျကုနျတိုငျး၆၂၃၁ဦး၊ဧရာဝတီတိုငျး၃၈၈၇ဦး၊မန်တလေးတိုငျး၃၂၄၄ဦး၊မှနျပွညျနယျ၂၈၄၅ဦး၊ပဲခူးတိုငျး၂၇၈၉ဦး၊စဈကိုငျးတိုငျး၂၇၁၂ဦး၊မကှေးတိုငျး၂၇၀၆ဦး၊ရခိုငျပွညျနယျ၂၄၇၄ဦး၊ကရငျပွညျနယျ၂၂၂၀ဦး၊တနင်ျသာရီတိုငျး၁၈၅၀ဦး၊ကခငျြပွညျနယျ၁၄၅၁ဦး၊နပွေညျတျော၁၄၅၀ဦး၊ရှမျးပွညျနယျတောငျပိုငျး၁၁၃၈ဦး၊ရှမျးပွညျနယျမွောကျပိုငျး၂၉၉ဦး၊ရှမျးပွညျနယျအရှပေို့ငျး၁၃၆ဦး၊ခငျြးပွညျနယျ၂၄၅ဦး၊ကရငျပွညျနယျ၈၅ဦးစုစုပေါငျးမွနျမာနိုငျငံအတှငျးမှာQurantine ဝငျနရေသူ ၃၅၇၆၂ဦးရှိနပွေီဖွဈပါတယျ။
#VOM #VoiceofMyanmar #ရှေးကောကျပှဲ#Qurantine #COVID-19
Covid -19 ကြောင့် Quarantine ဝင်နေရသူတွေနဲ့ မဲရုံစောင့်ရမယ့် ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေ ဘာစိုးရိမ်နေကြသလဲ ? သက်ဆိုင်ရာက ဘာတွေပြင်ပြီးပြီလဲ ?
မန္တလေး၊ စက်တင်ဘာ- ၁၄- ၂၀၂၀
၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရွေးကောက်ပွဲနီးမှ Quarantine ဝင်ရခဲ့သည်ရှိသော် ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့သော် ကြိုတင်မဲပေးခွင့်ရသူစာရင်းမှာ သေချာထည့်သွင်းမထားတဲ့အတွက် မဲပေးခွင့်ဆုံးရှုံးနိုင်တာမို့ စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။
ဒီလို စိုးရိမ်မှုတွေဖြေဖျောက်ဖို့ လူတိုင်မဲပေးခွင့် မဆုံးရှုံးအောင် Qurantine ဝင်နေတဲ့သူတွေနဲ့ Positive လူနာတွေ မဲပေးခွင့်ရအောင် ဘယ်လိုတွေစီစဉ်ထားသလဲလို့ ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးကို VOM က ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာမှာတော့
“ Quarntine ဝင်နေတဲ့ သူတွေ မဲပေးခွင့်မဆုံးရှုံးအောင် သက်ဆိုင်ရာ Qurantine Center ကအဖွဲ့တွေ၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အဖွဲ့တွေ၊ ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ကြီးကြပ်မှုတွေအောက်ကနေ အန္တရာယ်မဖြစ်အောင် မဲပေးနိုင်ဖို့ စီးစဉ်ထားပြီဖြစ်ပေမယ့် Positive လူနာတွေ ပါမဲပေူခွင့်မဆုံးရှုံရအောင် အသေးစိတ် ညှိနှိုင်းနေပြီဖြစ်တယ်” လို့ ဖြေပါတယ်။
လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ လူတိုင်းလူတိုင်းမဲပေးခွင့်မဆုံးရှုံးဘဲနဲ့ အန္တရာယ်ကင်းစွာ မဲပေးနိုင်ဖို့၊ မဲပေးတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့် ရောဂါကူးဆက်ပြန့်ပွားမှု ပိုမိုမဆိုးရွားစေဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေဟာ ကျမတို့အဓိကရည်ရွက်ချက် ၂ ခုဖြစ်တယ်လို့ လည်း ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးက ထည့်သွင်းပြောကြားပါတယ်။
မန္တလေးတိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရှိန်ဝင်းကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့
” ၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကာလမှာ Qurantine ဝင်နေသူတွေကတော့ ပုံစံ ၃ (က) နဲ့မဲပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Positive လူနာတွေအတွက်ကတော့ မဲပေးနိုင်ဖို့ မစီစဉ်ရသေးဘူး ” လို့ VOM ကို ပြောပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ Q Center က သူတွေကို ကြိုတင်မဲပေးနိုင်ဖို့စာရင်းကောက်ထားတာဖြစ်ပြီး မဲပေးမယ့်သူတွေကတော့ ပုံစံ ၃ (က)နဲ့ လျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
“မူဆယ်ဘက်ကလာတာတို့ မြဝတီဘက်ကလာတာတို့ မန္တလေးမှာရှိတယ်လေ နယ်တွေဘက်ကလာတာတို့ဆို ပေးမပြန်ဘဲနဲ့ မန္တလေးက Q Center တွေမှာ ဝင်ခိုင်းတာဗျ၊ အဲ့ Q Center က လူတွေစာရင်းကို ကျနော်တို့က ကောက်ခိုင်းတယ်၊ ဥပမာ အောင်မြေသာဇံက တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာ Q Center ရှိတယ်ဆို အဲ့ကလူတွေက အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်ကို စာရင်းပေးရမှာ အဲ့မှာ လူ ၂၀၀ ရှိတယ်ဆိုရင် အဲ့စာရင်းထဲမှာ မြင်းခြံက ပါမယ် တောင်သာကပါမယ်၊ အဲ့လိုဆို မူလမြင်းခြံတို့ တောင်သာတို့က မူလမဲစာရင်းတွေကိုဖျက်ပြီး သူတို့လက်ရှိရောက်ရှိနေတဲ့ Q center ကနေ သူတို့မဲပေးဖို့လုပ်နေပြီဆိုပြီး ၃ (ခ) နဲ့ လှမ်းဖျက်မှာပါ” လို့ မန္တလေးတိုင်း ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရှိန်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
Q Center က လူတွေက မဲပေးဖို့ လျှောက်ထားလာရင် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ကို ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေ ပုံစံ ၃ ခ နဲ့ ပယ်ဖျက်ပြီး မိမိတို့ရောက်နေတဲ့ မြို့နယ်က Q Center ကနေ မဲပေးနိုင်ဖို့ စီစဉ်ထားတယ်လို့ မန္တလေးတိုင်း ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရှိန်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ Q Center က လူတွေကို မဲပေးနိုင်ဖို့ စာရင်းကောက်ထားဆဲ ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ Q Center တွေမှာ လျှို့ဝှက်မဲဆန္ဒပေးဖို့ ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Qurantine Centerမှာ နေရနိုင်တဲ့သူတွေက မဲမေးခွင့်မရမှာစိုးရိမ်တာရှိသလို မဲရုံစောင့်ရမယ့် ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေမှာလည်း စိုးရိမ်မှု အပြည့်ရှိနေပါတယ်။
၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတုန်းက မဲရုံတစ်ခုမှာ တာဝန်ကျခဲ့ဘူးတဲ့ အလယ်တန်းပြ ကျောင်းဆရာမတစ်ဦးကို ၂၀၂၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲရုံတာဝန်ကျခဲ့ရင် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး VOM က မေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့
” အခု Covid sevond wave က ပိုပြီးမြန်ဆန်တော့ အပြီးသတ် နည်းနည်းလေးဝေးသွားလည်း ရွေးကောက်ပွဲရက်က နီးကပ်မှာဘဲလေ မြို့ပေါ်ကျမယ်သူနဲ့ နယ်မှာကျမယ့် ဆရာဆရာမတွေအတွက်က ပိုပြီးတော့အန္တရာယ်များတယ်၊ နယ်မှာဆိုရင်တော့ မဲရုံလုပ်မယ့်နေရာတွေမှာ၊ Qurantine Center တွေမှာ ရှိကိုရှိနိုင်တယ်၊ အဲ့ဒီတော့ မဲရုံတွေ၊ Qurantine center တွေကိုလည်း ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းထားဖို့သင့်ပါတယ်။ ရောဂါအခံရှိတဲ့ ဆရာဆရာမတွေအတွက်ကလည်း ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်နေရတယ်။ နိုင်ငံတော်က ပေးတဲ့တာဝန်ဆိုတော့ တာဝန်ကျရာတော့ လုပ်ရမှာပါ” လို့ ပြောပါတယ်။
မဲရုံစောင့်ရမယ့် ဆရာ၊ဆရာမတွေရဲ့ ကျမ္မာရေးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့ အစီအစဉ်တွေမှာတော့ နှာခေါင်းစည်း၊ လက်ဆေးရည်၊ လက်အိတ် ဆိုတာတွေ ပြင်ဆင်တယ်ဆိုတာလောက်ပဲ ကြားသိရပြီး တခြားအကြီးစားပြင်ဆင်မှုတော့ မသိရသေးပါဘူး။
အခုလက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ-၃၀၁၅ ဦး၊ရောဂါပျောက်ဆုံးပြီး ဆေးရုံဆင်းခွင့်ရသူ ၆၉၉ ဦး၊ သေဆုံးလူနာ ၂၄ ဦး အထိ ရှိလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
Election, ကနျြးမာရေး, ကနျြးမာရေး နဲ့ အားကစား, သတငျး